Baphi abasebenzisi be-GIS abaninzi? - Geofumadas
Uphi na abasebenzisi GIS ngezilingo?
NgoFebruwari, 2010 GIS asibonise
Ngethutyana elidlulileyo, ubukhulu becandelo lobuchwepheshe lobuDatshi landixelele eli binzana:
"Ngokunyanisekileyo, ndiyamangaliswa yintoni na iphepha leMifanekiso elithethayo. Yintoni eyenzekayo kukuba andikaze ndibone ukusebenza kumatshini "
Le veki, uPatrick Webber-ukusuka kwi-Spatial Knowledge-uye wenza isitatimende esingenakucatshulwa ukuba ngokuqinisekileyo uye wagxininisa iindevu ezifanayo zabadali beli sixhobo. Nangona ba ^ bengacingi ukuba banentshebe, kodwa ndiyibuyisela ukucinga ngokulandelelana kwam qi kelela - ctions kulo nyaka.
Iyintoni ingxaki ye-Manifold?
UPatrick usekelwe kwingcamango kaGeoffrey A. Moore, encwadini yakhe ethi "Ukuwela iAsare", Ephakamisa umjikelo wobomi owenzekayo ekuthotyelweni kwemveliso yekhompyutha. Omnye wabo izigaba ezibalulekileyo wabiza Umsantsa (Umsantsa), apho kuyimfuneko software ukugcina ukukhula ngokuthe ngcembe ngoxa lanefuthe abathengi yokuqala ziya, ukuba Ukunqanda umngcipheko zange efikelela ukufikelela icandelo ummeli emarikeni.
UPatrick uthetha ngokucacileyo ngokunyaniseka ukuba inqanaba elitsha leenkampani zobumba beMatyala, imodeli yentengo kunye nentsebenziswano yabasebenzisi kwiforum. Kodwa ugxeka umba okhuselekileyo kwifom yezoshishino, ngenxa yokuba ukunyanzelisa ukungabi nabathengisi okanye abameli ngaphezu kwekhasi lakhe, nangona kubangele ukuba xabisoIngaba ngumngcwabo ovimba ukukhula.
Kule nto, izisa iinani Iforamu yeqela, apho sibonisa khona into esiyicinga ngayo: Abantu abane 7x version abanakufumana isizathu sokuya kwi-8x kwaye balindele ukubona oko kwenzekayo nge-9x ephupha ukugqiba isigqibo sokuba ihamba okanye ayiyi. Kusenokuba ulwaneliseko iyonke, kodwa ukuba abasuka akhawunti nje $ 50 mvume nganye, kufuneka ucinge ezinye iingxaki ezinkulu njengoba format utshintsho vuhlayiseki, umzekelo, njengokuba awukwazi tirhisa .map of 8 7 yoguqulelo kwaye ibandakanya afuduka zonke iilayisenisi ezikhoyo. Ukungakhankanyi uphuhliso olwakhiweyo okanye iincwadi zokusebenzisa, okumele ukuba zachazwa ngokuba i-Manifold inikezela "ndincede"Ngendlela yakhe.
Yintoni eyenzekayo, ngoko ke, loo Mqulu iya kuba yinto efanelekileyo ye-rocket ye-geofumados kodwa ayiyi kuba yintlekisa kubasebenzisi abaqhelekileyo. Baya kulungiswa kwiingxabano abazifunayo -okuqinisekileyo kukho- kodwa ukukhanda amanqatha e-ESRI kudinga ngaphezu kokusebenzisa isofthiwe engcono kune-ArcGIS -ukuba kwizinto ezininzi kwaye zininzi- Kufuneka wenze uluntu, unxibelelwano olwaluphumelelayo, indawo yokuhlala ngolunye ulwimi, inkxaso ngaphandle kokusekelwe kumathokheni, kuquka "abavangeli bezobuchwepheshe" kwaye ngokugqithiseleyo nokuba nobuqhetseba.
Ngexesha elithile isofthiwe eswelekile, kodwa sonke siye sasebenza kwiinkampani eziqhelekileyo, ukuze kuthi kuthengwe ukufuna ukudibanisa nomntu, ukusuka apho inkqubo yokuxhasa, ukuqeqeshwa nokuhlaziywa kweelayisensi (zonke izikolo ezihlawulwayo). Okufanayo Bentley Systems Inomqobo walo wokulawula ukuthengisa kwayo ngendlela yesithili, esebenza kodwa ilibale ukuthengiselana, ngenxa yokuba ayinayo imali yasekuhlaleni, ngokuqhelekileyo inokuqhutyelwa phambili. Masingathethi ityala leenkcukacha, ukuba kufuneka usebenzise ukuthengwa kwe-intanethi, kunye nekhadi lesikweletu, ukuqala ngokungenawo umasipala oqhelekileyo kwaye kungekhona zonke iinkampani ezinomnye; kwaye, kuba bethu abaye bahlala kuyo, siyazi ukuba ukuthengwa kwebhanki kwinqanaba lokuxakeka kwiindawo eziqhelekileyo.
Hayi! Ndilibale malunga nenkxaso. Ilayisenisi eninzi ivela ezimbini nanzi iimpawu, kuphela emibini imibuzo ekuxhaseni. Ukuba ufuna enye, hlawulela; le ngcamango ayilunganga, kodwa kufuneka ubone ukuba isebenza. Akukhona ukuba kukho nantoni kubantu, kodwa amagama amathathu omemo xa kuthengwa isofthiwe ayanele: "Faka - Qala - Funda ", kuba kuya kuba nzima ukukholisa umphathi ukuba kwisicwangciso sokusebenza sonyaka omtsha kufuneka ukuba ushiye ibhajethi ye-15 nanzi iimpawu okanye uhlawule umhleli we-geofumadas ngenxaso yengxoxo :).
Ekupheliseni: Iintlobo ezininzi zesoftware, kodwa ayikhuli. Nangona i-8 version isele ikhona kwimilambo, isibonakaliso sokuba siyathandwa, bambalwa kakhulu abantu kwiwebhu bathetha ngamakhono abo, ngaphandle koxanduva lwabo ngomzekelo wemisebenzi yabathengi. Ukuba oku kuqhubekayo, kuya kuhlala kuba yinto yokudlala yecandelo elikhethekileyo leengcali kwaye liya kulahlekelwa ukuthandwa njengesisombululo esisisigxina se-GIS-yiyiphi into-. Kwaye isahluko sokugqibela salo hlobo lwenveli, sonke siyazi.
Kaloku, esandleni omnye abahlobo ngezifo ukuba ehlise ikratshi labo. Ingakumbi, ngaphandle discrediting isoftware kubonakala enkulu, ndisebenzisa rhoqo kwaye mna ndathetha ezindlebeni zakhe, ndibone iimpendulo kwimibuzo ezenziwe kwi-forum abo bangenalo ububele umthengisi kodwa umongameli we Bolivarian Alliance ethi "Nguwo urhulumente wam, apha ndiyalela, kwaye ngubani ongayithandiyo, utshintshe isiteshi".
Ngokuxolisa okwenene, kwabo bafana nolo hlobo lonyango kunye nabangandwendwela kumanye amazwe aseSouth Coast. Kodwa ukuba kwinqanaba likaGabriel Ortiz -lo likhululekileyo-silahlekelwe ngabahlobo ngenxa yezimpendulo ezimbi, singathethi kwithuba apho abadali be-software baphendula -yinto engekho nto-.
Ngenye imini ndambuza isebe le ntengiso, enye yayo yokuziphathaKwaye namhlanje ndiya kusithenga oko abanye bathi: Igcisa olungileyo akayi kuba ngumphathi elungileyo, yingqondi olungileyo ngeenxa ukuba nje usomashishini iintwala. Kukho amakhono, yaye nayiphi na umthengisi injongo software technologies guru uya kufuna izifundo ezingundoqo kwinkonzo lwabathengi kunye bakudala zabo mercadólogo kuye izifundo oko akayi kuza .NET API.
Yintoni eya kwenzeka kwiMinfold? Oko, kuxhomekeke kubadali babo. Ngokombono wam, ndicinga ukuba isilumkiso sikaPatrick sifanele sibe nesimo esihle.
Post edlulileyo«Edlulileyo Guqula degrees / imizuzu / lemizuzwana wokugqibela
Post Next Njengoko ubona iimephu non-geomaticsOkulandelayo "
Iimpendulo ze-14 "Kuphi abasebenzisi be-GIS abaninzi?"
Hayi, ndixelele ukuba ndiye ndicinga ngathi.
Ukususela ngokuphindaphindiweyo bangiphendulile efanayo (akunakuze kube ngenye indlela) ngeposi enomusa kodwa ejwayelekile.
Ndicinga ukuba kufuneka uthenge i-8, kuba akukho khuseleko xa i-9 iza kuza. Ukongeza, xa kuvela inguqulelo entsha apho kuhlala kukho ixesha lokuphakamisa lokufuduka lixabisa iUS $ 50 kuphela.
Ndinemibuzo engingazi ukuba ingaba nomdla kwabanye.
Thenga ezininzi ze-8.0 okanye ulinde i-9 ukuba iphume?
Ndiyitshintshe ikhompyutheni yam kwaye andazi ukuba ingafakela inguqulo ye-6.5 kwaye ndilindele ukuba i-9.0 iphume okanye ithenge kwaye ifake i-8.0.
Ndiyisebenzisa ngamanye amaxesha kwaye, ubukhulu becala, ukulungiselela ukuhlela iimephu zeeprojekthi zokuhamba, ngokungabikho kuhlalutyo, nangona ndingathanda.
Sawubona wonke umntu:
Ndinenkinga ngeMpawu. Ndiye ndavala ummandla wendawo kwaye ndifuna ukugqithisa i-orthophotos, kodwa oko kufuneka ndiwunqande. Xa ndigcina ezininzi ndifumana impazamo:
AWUBA UKUBHALA IMIDAQO YOKUBHALA
Yenza into, kodwa ingayifaki ngokuyiyo ngqo, kodwa njengomfanekiso wokungenisa. Nantsi ibonisa indlela . Omnye umda kukuba iza ngomnyama nomhlophe, nangona uthenga iPlex.Earth ngokwayo inokwenziwa ngemibala nangokuchaneka okungcono.
Ukuba andiyiphutha, ndicinga ukuba unokuxhuma i-Autodesk Land kwiGoogle Earth. I-Autodesk Land ine-GIS imisebenzi.
ukuba uyakwenza kwiGoogle Earth, I-Virtual Earth, Yahoo Maps, sele ikhona Vula i-Street Street, njengoluhlu lwe georeferenced (Imifanekiso ekhoyo).
Kananjalo akuba umfanekiso ubonisiwe, ukhetho "lokunxibelelanisa" lunokunikwa, umfanekiso ugcinwe ekuhlaleni, ngokuchanekileyo onokubekwa, kwaye sele ubekiwe. Ungayishiya ngaphakathi kwindawo yokugcina yeefayile (. Imephu yefomathi) okanye uyithumele kwelinye ilizwe ukuyigcina ngaphandle kwaye uyiyeke njengereferensi (edityanisiweyo)
Ngaba i-MANIFOLD IXHUMANA KWI-GOOGLE EHLABENI NJENGOBA KWAKUNYE OKUYE KWI-LAYER MORE?
Ndilibale, ukubingelela kubumbano yabafundi.
Kakade iimbono zide kuneposi.
1 Ushicilelo: ubuncinci phantse enye (okanye ngaphantsi) kune-ArcGIS, kwimbono yam idlula i-gvSIG.
Isantya se-geoprocesses, somelele kakhulu. Nokuba ukhetha ukusebenzisana nako GPU kwi-64 bits!.
Ukulawulwa kwecala ngaxeshanye, ukwenza kakuhle. Kule nto kunye nokucinga kwayo kwendabuko kunqabile, kuba ungqengqeleko lunokuba ne polygons, imigca kunye namanqaku.
3. Ukusebenzisana ... kunye neenkcukacha zolwazi kunye ne-raster, kukuhle, kokubili ukulungiswa kwempahla, ukugcinwa, ukukhomba kunye nokukhonza.
Ngeemigangatho, hamba umgama omfutshane, i-wms (umxhasi / umncedisi) wfs (iseva kuphela) oku kubi kakhulu.
Ngeendlela eziqhelekileyo zokuhamba kweefayile ze-GIS kuhle kakhulu (shp, kml, xml, njl), nangona kunenzuzo yokuba kufuneka bangeniswe kwi-gdb njengoluhlu, ukudibanisa kuphela kuvumela i-raster kunye neenkcukacha.
Kwinqanaba le-CAD lilinganiselwe, aluhambelanga kakhulu kunye namafomentshana asandul 'ukusetyenziswa ngokuqhelekileyo, i-dwg, i-dxf kunye ne-dgn, kungekho yile exhaswe yi-aligan evulekile, i-v7 ne-2000.
4 Inqaku lesine: Ukungaqiniseki ngokupheleleyo, ngakumbi ukuba bayigcina ingqumbo kwisoftware enexabiso eliphantsi, ekufuneka unxibelelwano lwenziwe kungekudala. Babonisa ukungangqinelani neefomathi ezinjenge-dgn kunye ne-dg, bahlala bejonga ukuba isoftware monster ivaliwe kwaye kwiimeko ezininzi iphelelwe.
Ayisiyo yokuba kufuneka ubeke imbeko kwi-AutoDesk, kodwa uyindoda, kungekudala kuya kufuneka uqonde umthengi kunye nemanyano ziyafuneka. Ithoni yabo ekubhekiseleni kukhuphiswano, inika ingcinga yokuba bangabakwi-antiESRI, kodwa abayiloo-antiMicrosoft, ngenxa yendlela abayifunda ngayo iSQL Server, bakhonza kuphela nge-IIS kwinto ebonakala ngathi nayo yi-antiLinux xa uthetha ngeApache.
Kulabo baphuhlisa izicelo yindlela efanelekileyo, njengokuba senditshilo kubasebenzisi beManifold, bahlala benelisekile, njenga ngubani oneteleskopu ephezulu kakhulu. Kodwa kule software, musa ukuhlala kwiteleskopu efanelekileyo, ngamanye amaxesha kubangcono ukuba ibe nayo yonke into enayo wonke umntu, kwimicimbi yentengiso yenkonzo, uqeqesho kunye notshintshiselwano lolwazi.
Kuphela ngenxa ye-grill oyinikezayo nge-MANIFOLD, uthola umdla. Inyani yile yokuba ukulayisenisa kuyafikeleleka. Ugqabaze kwezinye izixhobo ezifanele inkcitho ekuthengweni kwemveliso. Amathandabuzo: 1. Kuthekani malunga nezixhobo zokuhlela xa kuthelekiswa ne-gvSIG-ArcMap? 2 Isantya se-geoprocesses kunye nolawulo lwamacwecwe amaninzi ngaxeshanye. 3 Ukusebenzisana 4 Ukungaqiniseki ngekamva, ngakumbi ngenxa yokuvela nokuphuhliswa kwesoft-ethambileyo. Kukuba abathathu kuphela abandiqinisekisayo, ukuphucula ezi nkqubo sele zikhankanyiwe, ndiza kuphanda ngakumbi ngesoftware.
Tidy ... into enzima uyibuza umhlobo. Ndifunga ukuba ngenye imini ndiza, kodwa okwangoku:
Ngokuphathelele kwisoftware enkulu, owona mnikelo mkhulu yimodeli yamaxabiso. Oko akunakuphikwa, kuba ukusuka kwi- $ 235 ukuya kwi- $ 900 Manifold uyayenza (phantse okanye nangaphezulu) into obuya kuyenza ngeArcInfo, ArcSDE, ArcIMS, MapObjects, ArcGIS Server kunye nolwandiso olongezelelekileyo. Oku akubandakanyi iilayisensi zexesha elifanelekileyo ukusuka ku- $ 120.
Ngokubhekiselele kwesoftware ekhululekile, imfazwe iya kuwunqoba ngabanye, kodwa kungabikho kunye nokukhula okuye kwaphumelela.
Mhlawumbi into uManifold akhulise ukulindelwa kukukwazi kwakhe ukwenza izinto phambi kwabanye. Phakathi kwazo ndiyakwazi ukucinga ngezinto ezinje:
-Qhagamshela kwiGoogle Earth / iGoogle Maps / i-Virtual Earth / Yahoo imephu / Vula iimephu zezitalato ngokungenabunye owenzileyo, ukusuka apho nge 2006, ukwazi ukukhuphela umfanekiso njengokuba uza kuthi namhlanje ngeStchmaps.
-Yakha ifomathi esebenzayo ye-geodatabase (.map) ongaphatha kuyo isoftware enye oko kuya kukuchithela ixesha elifanelekileyo ukwenza ngeMephuerver + postgreSQL + gvSIG okanye indibaniselwano efanayo. Ngokulula ukudibanisa idatha yangaphandle okanye ukhonze ii-wms / wfs.
-Funda / ubhale amaninzi amaninzi yolwazi, kuquka kwi-bits 64.
-Ukuba unxibelelwano neGPU.
- Ulawulo lwezolimo
Akunjalo ukuba ezi zinto azenziwanga ngabanye, kukuba okokuqala benza okokuqala. Ngokufanayo, ukuba senza uluhlu lwabanye abantu abakwenzayo kunye ne-Manifold ayikho, kuya kuba nelinye uluhlu.
Okwenzekayo kukuba ukuvelisa izinto ezintsha kubonakala kungenele ukuba ezinye iinkqubo ziya kuthi ngenye imini zenze okufanayo. Uninzi lwezi zinto zintsha zinomtsalane kubasebenzisi abakhethekileyo kuphela, ngokubaluleka kuphuhliso kunye nokusebenza okungaqhelekanga.
Ukuthunyelwa kwangaphambili uthi:
Ngokunyanisekileyo, kunye nezikhulu ezinkulu (ArcGis, Autodesk, Mapinfo) kunye ne-soft soft (qgis, utshani, gvsig) kwicala labo ... Yintoni eyenza i-Manifold? Ngaba unokuphendula ngendlela efanelekileyo?